Apple Inotsvaga Cardiologists ine Chigadzirwa Kuvandudza Chiitiko | IPhone nhau
Kubva pakauya iyo Apple Watch, kunyanya kubva kune akateedzana 4, hutano hwave imwe yemapoinzi ayo Apple yakanangisa kuvandudza kwayo, kutsvagisa uye kusimudzira kwekuedza, kunyange kuenda kusvika pakutaura muzviziviso kuti Apple Watch ndiyo "ramangwana rehutano hwako pachiuno chako." Vakatangisawo mamwe masevhisi anoenderana neApple Fitness + kunyangwe yanga isati yakwanisa kuwedzera zvakanyanya pasirese.
Ikozvino Cupertino kambani, iri kutora mamwe ma profiles mundima yehutano, kunyanya ma cardiologist akanangana nekusimudzira zvigadzirwa zvemakiriniki kukwanisa kutora hutano hweApple Watch kune imwe nhanho.
Apple nezuro yakavhura nyowani dzakabatana nzvimbo mu LinkedIn yemuzinda wako Uye, zvinoenderana nema algorithms enetiweki yekudyidzana, patova nezvikumbiro gumi neshanu zvekupinda maitiro eApple. Tsananguro yebasa inojekesa izvo ma profiles ari kutsvaga kuti ashandire mukugadzirwa kwehunyanzvi hwehutano.
Sehunyanzvi hwekiriniki, iwe unotora chinzvimbo chakakosha mukushanda pamwe neinjiniya uye ekugadzira zvikwata mukuvandudza zvigadzirwa zvemakiriniki. Basa rake rekutanga rinosanganisira kubatsira kutsanangura mashandiro uye kurapwa kwakatemwa kwezvigadzirwa kuitira kuti vagadzire maficha matsva anoitirwa kukanganisa hutano hwemwoyo. Muchiitiko cheanodzorwa mashandiro, ichaita basa rakakosha mukugadzirwa kwezvidzidzo zvekiriniki uye mukuvandudzwa kwezvirongwa zvekutumirwa kwemitemo yekushandisa.
Izvo zvinzvimbo zvinokumbira humwe hunhu muvamiriri, uko a ruzivo rwakakura mune zvemoyo, ruzivo rwekare nezvigadzirwa zvetekinoroji uye ruzivo rwechirongwa chekuvandudza kiriniki yezvigadzirwa zvehutano zvakarongeka. Nekudaro, uye kunyangwe isu tichigona kufungidzira uye zvese zvichinongedzera kuApple Watch Hutano app, iyo kambani haina kudoma kuti ndezvipi zvigadzirwa zvaichashandira.
Ino haisi nguva yekutanga Apple kuvhura zvinzvimbo zveve cardiologist nevamwe vezvehutano. Muna 2019, zvatove akabhadhara David Tsay, chiremba wezvemwoyo paColumbia University Medical Center.
Aya matanho neApple anoita kuti tifunge nezve mashandiro matsva kana kuvandudzwa kweaya atovepo mune zvigadzirwa zvemberi kana ramangwana Apple Watch mamodheru, zvisinei, uye nekuziva kuti masarudzo esarudzo anogona kutora zvakadii, Chokwadi mitezo mitsva yeboka rezvehutano inotanga kukudziridza mashandiro matsva emamodeli mushure meanofungidzirwa manomwe akateedzana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple Inotsvaga Cardiologists Ine Chigadzirwa Kubudirira Chiitiko
Apple inomira kusaina iOS 14.4.1